Ra’iisulwasaraha Soomaaliya oo Golahisia Wasiirada dadkii ka Mid noqon lahaa gacanta ku heysata Sugayana Ansixinta Barlamanka. (Akhriso Xog muhim ah ) | Qubanaha	Home
Sunday, October 14th, 2012 | Posted by admin Ra’iisulwasaraha Soomaaliya oo Golahisia Wasiirada dadkii ka Mid noqon lahaa gacanta ku heysata Sugayana Ansixinta Barlamanka. (Akhriso Xog muhim ah )
Qubanaha 14-10 2012: Wararka laga helaayo Madaxtooyada Soomaaliya ,ayaa waxaa ay shegayaan in inta badan Raga iyo dumaraka Ka Midnoqonaayo Wasiirada cusub ee Soomaaliya la diyaariyey kadib markii Maalmahaan uu Ra’iisulwasaraha Soomaaliya ku jiray Wadatashiyo Ku aadan Arinkaan .
Siyaasiyiin Ku sugan Madaxtooyada oo lahadalay www.qubanaha.com ayaa waxaa ay shegeen in marka Ra’’iisulwasaraha Soomaaliya la ansixiyo ,aan la daahin doonin ku dhawaaqista Xukuumada Taasi oo lagu micneyey in Ra’iisulwasaraha Soomaaliya Gacanta ay ugu jiraan liiska Golahiisa Wasiirada .
Wasiirada ,ayaa waxaa la sheegay in ay noqon doonaan ku wa tira yar waxana ay u bad naan doonaan Dad cusub iyadoo lagu qeybiyey Qaabka belaha Somaaliyeed ay wax u qeybsadaan ee ah 4.5 walina si rasmi ah looma helin Magacyada Wassirada Cusub in kastoo wadatashi kadib xukumada la si ku afgartay.
Madaxweynaha Soomaaliya ayaa lashegay in uu isaga intabadan xulay wasiirada isagoona ka latashanaayey Ra’iisulwasaraha Lamagacaabay Abdi Farax Shirdon ,waxaana wasiirada inta badan ay ka imaan doonaan Koxda Damul Jadiid ee sidaweyn u taageersan Madaxweynaha Soomaaliya iyo Rag ay koxdasi asxaabyihiin.
Todibaad kan Gudahiisa ,aya awaxaa lagu wadaa in Ra’iisulwasaraha Soomaaliya uu hortago Barlamanka si loo ansixiyo .
Short URL: http://www.qubanaha.com/?p=8772
Mareykanka oo ka hadlay Weararkii ka dhacay UNDP Muqdisho.
Puntland Maxay ka tiri werar kii UNNDP Muqdisho.?
Cali dhere Muxuu ka yiri Werar kii ka dhacay Xarunta QM ee Muqdisho.